RADIO TENY FIAINANA Archives - RADIO TENY FIAINANA
HARILANTO : hanao hetsika ao amin’ny VIVA ARENA
Mpanakanto efa tsy zoviana amin’ny maro intsony raha i Harilanto noho izay talenta ananany eo amin’ny fiangaliana ny hira ara-pilazantsara izay,anisan’ny hira tena nahafantaran’ny mpankafy an’ny Harilanto ohatra ny hira mitondra ny lohateny hoe « malalany ianao » izay hira tsy afaka ao am-bavany ny olona tokoa. Araka izany, i Harilanto dia hikarakaraka hetsika goavana ho fiderana an’Andriamanitra izay hatao ny alahady faha 03 ny volana jona 2018 ho avy izao,izay hatao ao amin’ny VIVA ARENA manomboka amin’ny 02 ora sy sasany. Misy ihany koa anefa ireo mpanan-kanto nasaina manokana amin’izany,izay ahitana an’ny Joseph d’af sy ny tarika mialy rakotomamonjy.Efa vonona tanteraka na ireo mpanakanto hanao ny hetsika na ny toerana handraisana izany araka ny resadreasaka nifanaovana.Tsy izany ihany anefa ; fa hivoaka amin’io fotoana io ihany koa ny CD Audio an’ny Harilanto izay nampitodrainy ny lohateny hoe « Malalany ianao » miaraka amin’ny fonomezana manokana,izany no natao moa dia ho fanomezana fahafaham-po an’ireo mpankafy an’i Harilanto.Ny tapakila fandraisana anjara dia efa azonao jifaina eny amin’ny boutique family in jesus Ampatsakana, restor para-10 Ambatomena,Pharmacie d’Analakely ary eny amin’ny VIVA ARENA.
Araka ny fanaon’ny Fiangonana Loterana Malagasy, dia misy ny fotoana manokana izay atokan’ny fiangonana hahatsiaroavana ireo sampana rehetra mirafitra amin’ny FLM ka Isan’izany koa ny Radio, izay manana ny fotoan’ny manokana ahatsiarovana azy ka anokanan’ny Fiangonana Alahady iray ho fitoandrana am-bavaka azy sy hanohanana azy koa amin’ny alalan’ny ezaka manokana.
Ny Synodam-Paritany Antananarivo, izay irafetan’ny RTF mivantana, dia mahatsiaro mandrakariva ny onjampeo, ka ny Komity ny Synoda dia nanapaka fa ny Fiangonana FLM eto Antananarivo dia hanokana Alahady iray ho an’ny RTF, izay antsoina hoe Alahadin’ny RTF.
Efa nahavita ny anjarany ny FLM Ambatovinaky ny Alahady 25 Febroary lasa teo, izay anolorana fisaorana eto ny Komity sy ny Pastora rehetra ao nanome malalaka io fotoana io.
Ny FLM 67 Ha kosa dia ny alahady 04 Marsa izao no anatanterahana izany, koa dia misaotra mialoha azy ireo sahady koa ny Onjampeo.
Mbola maro ireo fiangonana efa nanolotra daty ny RTF, koa dia entintsika ambavaka ny fo fanatanterahana izany.
Ho voninahi’Andriamanitra irery ihany.